नेपालका ती ‘माक्र्स’
संगीत भनौं वा कलाको कुनै पनि विधा, यी राष्ट्रियता पहिचान बोक्ने विषय हुन् । त्यसैले संगीतकर्मी, कलाकर्मी भनेका सम्पदा बराबर हुन्छन् । विकसित देशहरूले यस्तै विषयलाई प्रोत्साहन गरेर आफ्नो राष्ट्रियतालाई बलियो बनाएका हुन्छन् ।
देशमा राजनीतिक उथलपुथल धेरै भइसक्यो । कुनै बेला अपरिवर्तनीय लाग्ने राजतन्त्र ढलिसक्यो । हामी संघीय गणतन्त्रका नागरिक बनेका छौं हामी । महिला राष्ट्रप्रमुख पाएका छौं । आधा आकाशका निम्ति ठूलो विजय नै हो यो ! तर यहाँसम्मको यात्रा कसरी तय भयो ?
कित जोत हलो कि त छोड थलो, यदि होइन भने अब छैन भलो’ भन्दै जनताका घरदैलोमा क्रान्तिको स्वर घन्काउँदै जाने भीमदत्त पन्तको जन्म १९८३ साल मंसिर १० गते भएको हो, साँझ अँध्यारो छिप्पिइसकेपछि ।